dadka isticmaala Windows XP laaluushay la $100 off Windows 8 qalabka - Rule News
dadka isticmaala Windows XP laaluushay la $100 off Windows 8 qalabka
IN Qiyaasteeduna quus LATEST in ay isku dayaan oo ay ku qanciso dadka isticmaala XP in ay casriyayso si ay u mashiinada cusub, Microsoft waxaa bixiya macaamiisha $100 off Windows qaarkood 8 qalabka hadii ay soo bandhigaan computer XP ay dukaanka.
Heshiiska ayaa ku egyahay 15 June, oo waxaa laga heli karaa dukaamada ee guud ahaan Maraykanka, Kanada iyo Puerto Rico. “Ugu deeq u khusaysaa macaamiisha dhigi gadashada online(s) qalabka isreebreebka Windows XP a, ama macaamiisha, kuwaas oo soo bandhigi qalab isreebreebka Windows XP lagu jiro iibka(s) in-dukaan oo kaliya,” Shirkadda Redmond ku sharaxayaa.
Inkastoo Microsoft sheegaye helitaanka online, ma cadda sida aad caddeyn karto in aad haysato a mashiinka Windows XP in ka badan web oo aan u qaadan galay dukaan.
The $100 dhimis waxaa laga heli karaa uun qalab cusub ujecel ugu yaraan $599, oo ka mid ah kiniiniyada oogada laga jaray dusha 2. Microsoft iftiimiyay hinaasin HP ku Touchsmart 15 laptop touchscreen iyo Lenovo ThinkPad S1 touchscreen Yoga hybrid laptop / kiniinka sida laba ka mid ah ay hindiseen xaq u heshiiska.
Microsoft waa cad ku kalsoon in xoogga heshiis this inay ka dhaadhiciso XP dhinta-hards meesha kuwa kale oo dhan ayaa ku guuldareysatay, sida uu ku taliyay in macaamiisha waxa loo xadeeyay hal qalab kasta oo.
Microsoft lagu soo gabagabeeyay doonaa dhammaan taageerada ay nidaamka qalliinka 12-sano jir ah ka 8 April. Shirkadda ayaa horay uga digay sida XP cabsan waxaa la barbar dhigo dhufto ee cusub Windows, iyo la-hawlgalayaasheeda sida HP waxay ku dadaaleen olole ad in ay isku dayaan iyo dhiiri-galiyo ganacsatada si ay kor.
Inkastoo dadaalkaasi, XP waxaa weli si weyn loo isticmaalaa guud ahaan ururrada iyo shakhsiyaadka, oo si cad u sii joogi doonaa isticmaalka post 8 April. m
article Tani, dadka isticmaala Windows XP laaluushay la $100 off Windows 8 qalabka, waxaa syndicated ka weyddiista oo waxaa halkan fasax posted.
20601	0 Canada, weyddiista, Microsoft, Microsoft oogada, Microsoft Windows, Puerto Rico, Windows 8, Windows XP
← MH370 search dib on sida talaabo sharci ah ugu horeysay bilaabmaa qiimaha saliidda US kici on adkaynaya siin at xarun muhiim ah →